Rosselkhoznadzor wuxuu hubiyay 2 kun oo tan oo baradho ah oo cusub - PotatoSystem
Rosselkhoznadzor wuxuu hubiyay 2 kun oo tan oo baradho ah oo laga keenay Azerbaijan oo laga keenay Moscow
Meey 29, 10:17
Shaqaalaha Rosselkhoznadzor ee Moscow, gobollada Moscow iyo Tula waxay soo kormeereen 130 baabuur waxayna hubisay in ka badan 2,1 kun oo tan oo baradho ah oo laga keenay Azerbaijan.
Dhammaan alaabada ayaa buuxisa shuruudaha ka hortaga jirka ee karantiilnimada. Xaqiijinta kadib, baradhada waxaa loo daayay iib bilaash ah.
Horaantii, Moskva.ru wuxuu soo sheegay in in kabadan 380 tan oo jeeriga ah oo laga helay gobolka Moscow ay hubiyaan shaqaalaha Rosselkhoznadzor. Waxaa la ogsoon yahay in berry ay la kulmaan dhammaan shuruudaha daaweynta jirka iyo in ay gabi ahaanba amaan yihiin in la cuno.
In ka badan 170 kun oo tan oo badeecooyin la xakameeyay ayaa laga soo raray xadka Kazakhstan
Wasaaradda Beeraha waxay filaysaa in isbedel wanaagsan lagu sameeyo waaxda beeraha sanadka 2020